woman stimulation spray – MM Online Shopping
woman stimulation spray
woman strimulation spray ဒီ sprayသည် အမျိုးသမီးများအတွက် ရမ္မက်နိုးကြွစေရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော spray ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းတွင် မအင်္ဂါကို လှုံဆော်ပေးခြင်းနှင့် ရမက်စိတ်ကို နိုးကြွပေးနိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မူရှိပါတယ်အရင် Vactive spray က ထပ်မ၀င်တော့လို့ဒါလေးကို ထပ်မှာထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် အိမ်ထောင်ရေးသုခပိုမိုပြည့်စုံစေဖို့ အမျိုးသမီးများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းလေး လာပါပြီးရှင့်အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေလို ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်
လာဖို့မမြန်တတ်ပါဘူး ။ ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တော့
လည်း အမျိုးသားက အရင်ဦးစွာ ကိစ္စပြီးသွားတတ်ပါ
တယ် ဒီစပရေး လေး ကတော့ အမျိုးသမီးတွေကို
ခြင်းတွေပေးသွားဖို့ တာဝန်ယူပေးပါလိမ့်မယ် ။
ဒီဆေးက အမျိုးသမီးသုံးတဲ့ဆေးပါ ။
မအင်္ဂါအစေ့ ၊မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်(နှုတ်ခမ်း) ၊ များကို spray ဖြင့် ၂ချက် သို့ ၃ချက်လောက်ဖြန်းပေးပါ မအင်္ဂါတွင် ဆေးရည်များ စိမ့်ဝင်သွားအောင် ငါးမိနစ်လောက်စောင့်ပေးပါ ထို့နောက်အတူနေနိုင်ပါပြီး အကယ်၍ သက်တောင့်သက်သာ မရှိသလို့ ခံစားရပါက ရေဖြင့် ပြန်လည်ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးများအထွတ်အထိပ်ကိုမြန်မြန်ရောက်စေတယ်ခံစားမူ အရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်ပေးတယ်ခံစားမူအာရုံနှင့်အထိအတွေ့ကိုလည်း ယခင်ကထက်ပိုကောင်းမွန်စေတယ်စိတ်ကျေနပ်မူကိုအပြည့်အ၀ရရှိခြင်းဖြင့် စုံတွဲများအကြားတွင် အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသော ခိုင်မာမူကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။
ကလေးငယ်များအလွယ်တကူ မယူနိုင်သော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ ။ မျက်လုံးထဲဝင်လို့မရပါ ထိခိုက်ကွဲရှနာဖြစ်နေသော အရေပြားထဲ ၀င်လို့မရပါ အေးမြပြီးခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ နေရောင်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေရာတွင်မထားရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မသုံးရ
Ingredients: Propylene Glycol, Alcohol Denat., Aroma, Laureth-9, Aqua, Panthenol, Vanillyl Butyl Ether, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Eugenol, Limonene, Linalool
မိန်းမကိုယ်ခြောက်သွေ့မူကို ကုသပေးခြင်း ကာမစိတ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး ကာမဆက်ဆံရာတွင်ပြီးမြောက်စေခြင်း မှတ်ချက် သတ်မှတ်အညွှန်းထက်ပိုမသုံးရ အကယ်၍များ ထူးခြားသောလက္ခဏာအသွင်အပြင်များပေါ်ပေါက်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသောသူများသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်
Austrian HOT Fantasy Geisha Passion Spray Enhances Women’s Pleasure Orgasm Liquid
Function and use Female clitoris stimulates excitement
Shiatsu Stimulation Spray Woman 50 ml
The shiatsu Stimulation Spray for women isatop quality care spray for special erotic pleasure. It can haveastimulating and erotic effect. Justafew pumps to completely cover the outer labia and clitoris (clit) withafine mist. The advantage of the spray is the easy hygienic use and rapid application.
pumpacouple of sprays of shiastu stimulation spray women on the outer lips of the vulva and the clitoris until thoroughly moist and allow to soak in
Be the first to review “woman stimulation spray” Cancel reply
nipple and pucci vibrator
Ks22,000.00 Add to cart
Ks30,000.00 Add to cart
KEGAL BALL /BEN WA BALL
medicate pearl မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းဆေးလုံး
Ks11,000.00 Add to cart
female breast enhancer pump